SPC raaxo Vinyl Warshad Gogosha, shirkado cusub
ku dheji dabaqa vinylka
1. Ka-siib-ka-bixidda, Caariyaysi-lidka, Nabaro-xoqeyn heer sare ah iyo bakteeriyada lidka ku ah 2. Nuugista dhawaqa iyo yareynta buuqa 3. Is-beddelidda badan, nabadgelyada sare 4. Si sahlan loo rakibo 5. Qiimaha dayactirka oo hooseeya, waxna loo baahan yahay 6. Magaca Nolosha Dheer Magaca Gogosha Vinyl (EIR SPC sagxadda dhulka) Midab joogto ah u yeelo midabkaaga ama sida shaybaarkaaga oo dhumucdiisuna tahay 4.0mm, 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6mm ama Xidhmo lakab khaas ah oo qaas ah 0.3mm, 0.5mm, 0.7mm sida oogada oogada caadiga ah Naqshadeynta Veneer (Hard / Softwood) hadhuudh, marmar, dhagax, rooga. Sur ...
5.5mm SPC sagxadda vinylalkohol
Waxsoosaar: Taayiro raaxo leh oo biiniyaal ah oo biyuhu ka kooban yihiin caaga PVC Plank adag Gogosha Vinyl
Stone Caaga Composite (SPC) sagxadda dhulka, qaybta ugu gaar ah waa lakabka asaasiga ah ee adag oo inta badan laga sameeyo budada lime. Taasi way ka xasilloon tahay taayirada vinyl-ka dhaqameed. Dhagaxan isku dhafan ee caaggu wuxuu u adkaysanayaa ballaadhinta iyo foosha muddo tobanaan sano ah wuxuuna si fiican ugu shaqeeyaa meel qoyaanka laga yaabo inay tahay arrin. Waa 100% biyuhu biyuhu ma dillaaci doonaan oo ma qalloocin doonaan.
Si lamid ah sagxadda LVT, sagxadda vinylka adag ayaa sidoo kale u ekaan kara alwaax ama dhagax leh lakabka daabacaadda iyo lakabka xirashada la moodo ee sameeya Waxaad ka heli kartaa dabaq aad u xasilan oo xasilloon oo haddana qurux badan.
Gogosha adag ee Vinyl waxay si fiican ugu shaqaysaa labadaba goobaha ganacsiga iyo kuwa la deggan yahay. Lakabka xirashada UV ee dahaarka leh ayaa ka dhigaya mid u adkeysanaya xagashada iyo nabarrada ka hooseeya dharka maalinlaha ah. Iyada oo leh nidaam gujin gaar ah iyo naqshad gees ah, looxyada vinylka ee loo yaqaan 'SPC vinyl' waxay ku xiran yihiin si siman oo si adag oo adag oo aan xabag lahayn